Ku muuji go’aankaaga iyo cawaaqibkiisa waqtiga saxda ah
Waqtigu waa muhiim. Haddii aad ku dhawaaqdo go’aankaaga goor hore oo la xiriirta dhaqan gelintiisa, waxaad abuureysaa waqti hubaal la'aan taas oo waxyeello keeni karta. Laakiin haddii aad ku dhawaaqdo xilli dambe, oo aanad fursad u helin shaqaalaha inay tallaabo hore u qaadaan oo ay helaan sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan cawaaqibka, markaa waxaad halis ugu jirtaa inaad iyaga dareento inay la kulmeen waxqabad fulin ah.
Waqtiga ayaa lagu xisaabtamayaa sida aad uga qayb qaadanayso kooxda wax ka qabashada cawaaqibka. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in si sax ah loo daayo waqtiga udhaxeeya daqiiqada aad ku dhawaaqeyso iyo sharraxaadda cawaaqibka kooxda ayaa ku filan si loogu oggolaado iyaga milicsigaan.
Toos ugu soco barta
Waqtiga lagu dhawaaqay ogeysiiska aan la jeclayn, waxaad halis ugu jirtaa inaad ku dhacdo dabin caadi ah: ku billow faragelintaada sababaha go'aanka adoo ka cararaya duruufaha dhaqaale, meeleynta tartanka ... Weli wax macluumaad ah kama heysan go'aanka. - xitaa, kooxdu waxay la yaabban tahay halkaad u socoto tan oo runti mar dambe dhegaysan mayso. Saamaynta aan fiicnayn ee dabeecadda noocaas ahi waa abuurista shaki iyo kalsooni darro hadalkaaga.
Ku dhawaaqida go'aan aan la jecleysan: maxaa la sameeyaa? Janaayo 20th, 2021Tranquillus
horeTemplate warqad si aad u dalbato bixinta mushaharkaaga oo aan la bixin
socdaMaareynta Agile… Jawaabta degdegga ah ee dhibaatada, mise qaab waara?